Kudyidzana kwepasi rese kwehupfumi: chii icho, ndezvipi zvakanakira nekuipira zvine | Ehupfumi Zvemari
Encarni Arcoya | 30/05/2021 12:16 | Zvematongerwo enyika
Imwe yemifungo inonzwika zvakanyanya kwemakore mashoma munyaya yezvehupfumi ndeye inonzi kudyidzana kwepasi rose. Izwi iri, risinganetsi kunzwisiswa, rinosanganisira imwe yeanonyanya kukosha ruzivo mune zvehupfumi.
Asi, Chii chinonzi kudyidzana kwepasi rose? Ndezvipi zvazvakanakira nezvazvinogona? Chii ichochi?
1 Chii chinonzi hupfumi kudyidzana
1.1 Chii chinozivisa kudyidzana kwenyika mune zveupfumi
2 Zvakanakira nekuipira kwekudyidzana kwepasi rose kwehupfumi
2.1 Zvakanakira kudyidzana kwepasi rose kwehupfumi
3 Saka kudyidzana kwepasi rose kwakanaka kana kwakaipa?
Chii chinonzi hupfumi kudyidzana
Tinogona kududzira kudyidzana kwehupfumi seye "Kubatanidzwa kwehupfumi nekutengeserana kunoitika kuburikidza nenyika dzinoverengeka, padanho renyika, rematunhu kana repasi rose, uye chinangwa chavo kutora mukana wezvinhu nemabasa enyika imwe neimwe" Mune mamwe mazwi, isu tiri kutaura nezve kugona kwenyika kusanganisa zvinhu zvavo nemasevhisi uye nekumisikidza hupfumi nekutengeserana marongero pakati penyika idzo dzinozvisanganisa.
Nenzira iyi, a kukura kwepamusoro kwenyika dzese, asi zvakare zvimwe zvakawanda zvimwe zvinhu senge tekinoroji, kutaurirana, nezvimwe.
Chii chinozivisa kudyidzana kwenyika mune zveupfumi
Kunyangwe iyo pfungwa ichitojekesa izvo zvatiri kureva nezvazvo nekudyidzana kwepasi rose, ichokwadi kuti kune zvimwe hunhu zvekutora nguva ino. Uye ndezvekuti:
Inotongwa zvichibva pazvibvumirano zvakachengetedzwa uye zvakasimbiswa pakati penyika dzinobvumirana kusanganisa yavo zviwanikwa nezviwanikwa, kusaina nekuvamanikidza. Aya magwaro ekutengeserana mahara, kana emabhizimusi ehupfumi, ari pamusoro pekudzora basa rakanaka renyika.
Se inokurudzira kuumbwa kwemabasa, pamwe nehupfumi hwenyika dziri kubatanidzwa. Mupfungwa iyi, chokwadi chekukwanisa kuwana basa rakakodzera, kunyangwe kana isiri munyika imwe chete, chinobatsira kufambira mberi.
ari zvinhu nemasevhisi anotengeswa kunze kwenyika. Ndokunge, izvo zvigadzirwa izvo imwe nyika isina, asi imwe inayo, inogona kuve nerusununguko rukuru rwekupinza kunze kwenyika, uye panguva imwechete, izvo zvavanazvo uye zvakaenzana kufarira kune dzimwe nyika.
Kudyidzana kwepasi rose kwehupfumi kuri riripo munyika yese. Asi nguva dzose vanobvumirana pasi pezvibvumirano zvakasiyana (zvinoenderana nenyika dzakasaina).
Zvakanakira nekuipira kwekudyidzana kwepasi rose kwehupfumi
Panguva ino muchinyorwa, zvingangoita kuti iwe watove neruzivo rwekuti zvakanaka here kana zvakaipa kuti hupfumi hwepasi rose huripo. Uye chokwadi ndechekuti, sezvazviri mune zvese, ine zvinhu zvayo zvakanaka nezvayo zvakaipa zvinhu. Naizvozvo, pakusaina zvibvumirano, nyika dzinowanzo ongorora zvakanyanya kuti zvakanakira nyika here kana kuti kwete.
Zvakanakira kudyidzana kwepasi rose kwehupfumi
Pakati pezvakanaka zvinhu zvatinogona kukudana iwe nezve hupfumi hwepasi rose, isu tine:
Maindasitiri ekugadzira mitengo anodonha. Nekuti pane kuwirirana pakati penyika, zvigadzirwa zvigadzirwa zvinowanzo kuve zvakachipa, zvichiita kuti kugadzirwa kwemaindasitiri kudhure. Izvi zvinokanganisawo mutengo wekupedzisira wezvigadzirwa, kuitira kuti zvinhu nemasevhisi apiwe pamitengo yemakwikwi.
Wedzera basa. Kunyanya munyika dzinoda vashandi, asiwo mune idzo dzinowedzera kupinza kwavo kunze kwenyika, nekuti ivo vanoda basa kuti vaite iro basa pacharo.
Pane kukwikwidzana pakati pemakambani. Unogona kubata izvi sechinhu chakanaka, asi zvakare sechinhu chakaipa. Uye ndiko kukwikwidzana pakati pemakambani kunogara kuri chinhu chakanaka, nekuti ichawedzera zvigadzirwa, kukurudzira kugona mavari uye kuyedza kupa zviri nani zvinhu nemasevhisi. Nekudaro, zvinogona zvakare kuve zvakashata mupfungwa yekuti nemakwikwi akawanda zvinonyanya kuomera mabhizinesi madiki kukwikwidza neakakura.
Inokurumidza pakugadzira, pamusoro pezvose nekuti matekinoroji ese uye hunyanzvi hunoiswa mukushandira nyika dzese uye, neizvi, zvinokwanisika kukwidziridza tekinoroji uye kuita kuti munhu wese afambire mberi munzira imwechete, mukuwedzera mukusimudzira budiriro yepasi rose.
Asi hazvisi zvese zvakanaka, kune zvinhu zvakawanda zvisina kunaka izvo kudyidzana kwepasi rose kwehupfumi kunounza kwatiri, sekuti:
Kusaenzana kwehupfumi. Kunyangwe isu tataura kuti nyika dzinoita chikamu chadzo kuitira kuti zvinhu nemasevhisi zviitwe pakati pevose, zviri pachena kuti hupfumi hwenyika imwe neimwe hunofambisa budiriro, nenzira yekuti pane mutsauko pakati peimwe hupfumi neumwe.
Zvakatipoteredza zvinokanganiswa. Kumwero mukuru kana mudiki. Izvi zvinodaro nekuti, kune chakakura chigadzirwa, pachavewo nekusviba kukuru, uye ndosaka zvichikosha kutanga mitemo yekuchengetedza nharaunda.
Kushaya basa kwakakwirira. Hongu, zvinopesana neruremekedzo kune zvatainge tambotaura, kuti mamwe mabasa akagadzirwa. Dambudziko nderekuti, sezvo paine huwandu hukuru hwevanhu, makambani anowanzo tsvaga avo vashandi vane mari yakawanda, uye zvakafanana zvichaitika nevashandi. Izvi zvinorevei? Zvakanaka, pachave nekushomeka kwemabasa munyika dzine vashandi vanodhura.
Kuderera kukura. Nekuderedza mikana yebhizinesi (kubva pane zvatakakuudza nezve kukwikwidza bhizinesi) izvo zvinokanganisa zvakashata hupfumi hwenyika.
Saka kudyidzana kwepasi rose kwakanaka kana kwakaipa?
Zvichienderana nenyika yaunobvunza, inokuudza chimwe chinhu kana chimwe chinhu. Sezvawaona, ine zvinhu zvayo zvakanaka nezvayo zvisina kunaka, uye izvo zvinokanganisa nyika yega, kungave nekuiita yakapfuma kana kushoma.
Asi kuitira kuti usazvikuvadze, kune zvibvumirano zvekutengeserana. Izvi zvakasainwa zviri zviviri, kana zviri pakati penyika mbiri; kana multilateral kana ichisanganisira nyika dzinoverengeka. Uye ivo vanosimbisa kuti ndeapi marongero anofanira kuteverwa. Nyika yega yega inofanirwa kuongorora gwaro iri risati raisaina kuti rizive kana zviri izvo zvakavanakira kana, kana zvisiri, zviri nani kuramba uchiita sepakutanga.
Imwe sarudzo yakashandiswa ndeye shandisa zvivakwa zvehupfumi, ndokuti, mirau inoitwa pakati penyika dzinoverengeka kumisikidza zvinodiwa maererano nezvimwe zvinhu: mitero, zvigadzirwa zvinobva kunze kwenyika, nezvimwe.
Kudyidzana kwepasi rose kwehupfumi kunogona zvakare kuitika unilaterally, munyika imwechete, semuenzaniso nekugadzirisa mitengo yemitero, izvo zvinodiwa kupinza kana kutumira zvigadzirwa, nezvimwe. Nekudaro, hupfumi hwenyika hunowanikwawo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvematongerwo enyika » Kudyidzana kwehupfumi